Maxaa Ka Soo baxay Kulamada Madaxda Dowlad Gobaleedyada iyo Ergayga Qatar – Goobjoog News
Ergayga dowladda Qatar u soo magacawday Soomaaliya Dr Mutlaq Al-Qaxtani, ayaa kulama la qaatay xubna ka tirsan madaxda dowlad gobaleedyada dalka .
Dr Mutlaq ayaa la kulmay madaxweeynaha dowlad gobaleedka Galmudug Axmed cabdi kaariye Qoor Qoor iyo mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug .
Ergayga ayaa sidoo kale kulan la qaatay Madaxweeynaha dowlad gobaleedka Koonfur galbeed Cabdiaziz Xassan Lafta-gareen , iyadoo kulamadaan looga hadlay xaaladda dalka iyo khilaafaadka arrimaha doorashooyinka .
Kulamada uu la qaatay Dr Mutlaq madaxda dowlad gobaleedyada ayaa intii ay socdeen waxaa leysla meel dhigay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka muddada dheer ka jira doorashooyinka iyo sidii la isaga kaashan lahaa ka hortagidda weerarada argagixisada.
Madaxweeynaha dowlad gobaleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa isna dhankiisa la kulmay Ergayga Qatar Dr Mutlaq .
Guudlaawe ayaana isna kala hadlay Mutlaq sidii looga heshiin lahaa khilaafka doorashada dalka ee mudada dheer ka jiray dalka
Dhanka kale Dr Mutlaq bin Maajid Al-Qaxtani, ayaa kulan la qaatay madaxda sare ee maamulka gobalka Banaadir .
Guddoomiyaha gobalka Banaadir Cumar Filish ayaa kulan la qaatay Ergaygan cusub ee Qatar Soomaaliya u soo dirsatay .
Cumar Filish iyo ergayga ay ka wada hadleen Dr Mutlaq bin Maajid Al-Qaxtani, Xaaladda magaalada Muqdisho iyo Arrimaha doorashooyinka dalka.
Dr Mutlaq bin Maajid Al-Qaxtani, oo laba cisho ka hor soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa kulama la qaatay madaxda dowladda Federaalka , Madaxda dowlad gobaleedyada dalka iyo Xubna ka tirsan midawga Musharixiinta .